Jorge Mendes oo hoos u dhigay Messi, isagoo u arka in Ronaldo uu yahay kan ugu fiican taariikhda – Gool FM
(Europe) 16 Okt 2019. Jorge Mendes oo ah wakiilka xiddiga kooxda Juventus ee Cristaino Ronaldo ayaa sheegay in hadda kaddib uusan imaan doonin laacib ka fiican kabtanka xulaka qaranka Portugal.
Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleystey inuu gaaro goolkiisii ​​700-aad ee xirfadiisa ciyaareed kubadda cagta, inta lagu gudi jiray kulankii ay ku wada ciyaareen xulka qaranka Ukraine ee isreebreebka koobka Euro 2020, inkastoo loogu awood sheegtay xulka Portugal 2-1.
Haddaba Jorge Mendes oo aaminsan in Cristaino Ronaldo uu yahay xiddigiaugu fiican taariikhda kubadda cagta ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska Tuttosport ee dalka Talyaaniga wuxuu ku sheegay:
“Rikoorrada Ronaldo been ma sheegaan, rikooradda uu sameynayo Cristaino waa kuwa xad dhaaf ah, tanina waxa ay ka dhigeysaa inuu ku jiro qeybta ugu fiican ee taariikhda kubada cagta, wuxuuna farqi weyn kaga sareeyaa marka loo fiiriyo shaqsiyaadka ku soo xiga”.
Yeelkadeeda, Jorge Mendes oo ka hadlayay koobabka uu kula guuleystay Cristaino Ronaldo xulkiisa Portugal, ayaa wuxuu si maldahan kaga hadlay waayaha ciyaareed Lionel Messi ee xulkiisa qaranka Argantina wuxuuna yiri:
“Xaqiiqdii wuxuu la ciyaaray xulkiisa qaranka Portugal 3 final ah, wuxuuna kula guuleystay labo ka mid ah, wuxuu dhaliyay 700 oo gool, shaki kama qabo inuu dhaafi doono rikoorrka gooldhalineed taariikhiga ah ee Pele, wuxuuna guushaas ku gaari doonaa Juventus”.
“Intaas kaddib 68 gool, lama badna Cristiano Ronaldo, miyeeysan sidaas aheyn? Sidaas darteed anniga ahaan kuma qanacsani in hadda kaddib uu imaan doono xiddig ka fiican Cristaino”.
Waxaa xusid mudan in Cristiano Ronaldo uu kula guuleystay xulkiisa qaranka Portugal koobkii Euro 2016 iyo UEFA Nations League, halka sidoo kale laga badiyay fiinalkii Euro 2004, laakiin taasi bedelkeeda Lionel Messi ayaa la kulmay guuldaro 3 final uu la gaaray xulkiisa qaranka Argantina.